Companylọ ọrụ anyị - Uniproma-Mgbe Chemistry Na-arụ ọrụ
E guzobere Uniproma na United Kingdom na 2005. Kemgbe e guzobere ya, ụlọ ọrụ ahụ etinyewo aka na nyocha na mmepe, mmepụta, na nkesa kemịkal ọkachamara maka ihe ịchọ mma, ọgwụ, na ụlọ ọrụ kemịkal. Ndị guzobere anyị na ndị isi oche anyị nwere ndị ọkachamara na ụlọ ọrụ si Europe na Eshia. N'ịdabere na ụlọ ọrụ R&D anyị na ebe a na-emepụta ihe na kọntinent abụọ, anyị na-enye ndị ahịa gburugburu ụwa ihe ịrụ ọrụ nke ọma, na-acha akwụkwọ ndụ ma na-abawanye uru. Anyị ghọtara kemistri, anyị ghọtara nghọta nke ndị ahịa anyị maka ọrụ ndị ọkachamara. Anyị maara na ogo na nkwụsi ike nke ngwaahịa dị ezigbo mkpa.
Ya mere, anyị na-erube nnọọ esoro ọkachamara àgwà management usoro si mmepụta ka njem ikpeazụ nnyefe iji hụ na traceability. Iji nyekwuo ọnụahịa ndị bara uru karị, anyị eguzobewo usoro nkwakọba ihe na arụmọrụ nke ọma na mba ndị isi na mpaghara, ma gbalịsie ike ịbelata njikọta etiti ka o kwere mee iji nye ndị ahịa ọnụahịa-arụmọrụ bara uru karị. Na ihe karịrị afọ 16 nke mmepe, anyị na ngwaahịa na-exported karịa mba 40 na mpaghara. Ndị ahịa ahụ gụnyere ụlọ ọrụ mba dị iche iche na ndị ahịa buru ibu na ndị ahịa dị obere na mpaghara dị iche iche.
2005 Guzobere na UK ma bido ahia anyi banyere nzacha UV.
2008 guzobere osisi mbụ anyị na China dị ka ngalaba-onye nchoputa na nzaghachi maka ụkọ nke ngwaọrụ maka sunscreens.
Osisi a mechara bụrụ onye na-emepụta PTBBA kasịnụ n'ụwa, nwee ikike kwa afọ karịa 8000mt / y.
2009 E guzobere alaka ụlọ ọrụ Asia-Pacific na Hongkong na China.
Ka kemịkal rụọ ọrụ. Ka ndụ gbanwe.
Na-enyefe ụwa ka mma ma dị ndụ.
Iguzosi ike n'ezi ihe & nraranye, Na-arụkọ ọrụ ọnụ & ringkekọrịta Successga nke Ọma; Ime Ihe Ziri Ezi, Ime Ya nke oma.
Taa 'ọrụ mmekọrịta mmadụ na ụlọ ọrụ' bụ isiokwu kachasị ewu ewu gburugburu ụwa. Kemgbe mmalite nke ụlọ ọrụ na 2005, maka Uniproma, ọrụ dịịrị ndị mmadụ na gburugburu ebe obibi arụwo ọrụ kachasị mkpa, nke bụ nnukwu nchegbu maka onye guzobere ụlọ ọrụ anyị.